पैसाको रूख कसरी पानी जोगाउनुहुन्छ?
लगभग हरेक घरमा त्यहाँ एक पैसा रूख हो वा यो पनि एक मोटो केटी भनिन्छ। चूंकि पौडी अनौठो छ, यसको हेरविचारमा कुनै विशेष समस्या छैन। यो कुनै पनि अन्य संयंत्रको लागि न्यूनतम नियम पालन गर्न पर्याप्त छ, र रूख ईर्ष्यामा बढ्नेछ।
कसरी राम्रो तरिकाले पैसाको रूख पानी जोगाउनु हुन्छ?
मुख्य समस्या भनेको घर मा एक वसा स्त्री बढाने को बारे मा कितनी पल्ट एक पेड को पेड को पानी छ। आखिर, कुनै पनि रोपण को लागि पानी को मुख्य विकास को मुख्य कारक हो जो यसको सफल विकास को निर्धारण गर्दछ। सबैलाई थाहा छ कि विभिन्न बिरुवाहरू आफ्नै प्राथमिकताहरू हुन्छन् - कसैलाई सुक्न मिट्टी र दुर्लभ पानीले मनपर्छ, अरूले माटो सुक्न बिना नियमित चिसो चाहिन्छ।
चूंकि पैसाको रूख गर्म देशबाट आउछ, त्यसपछि, यस परिवारमा थुप्रै बिरुवाहरू जस्तै, पत्तिहरूमा धेरै धेरै नमी जम्मा हुन्छ, जसको अर्थ हो कि थोडा थोपाको लागि पानी बिना काम गर्न सक्छ।
पत्ता लगाउनुहोस् जब पौधे संग फूलपट्टी को पानी को बहाली को लागी जरूरी हुनुको लागी अर्को पक्का बस - मिट्टी को स्पर्श मा सूखी हुनु पर्छ। जाडोमा, माटोको सुखार्ने निचो हावाको तापमानको कारण कम हुन्छ, तर ग्रीष्ममा यो प्रक्रियाले गति बढाउँछ।
सर्दहरूमा पैसाको रूख एक प्रकारको अस्थायी अवधि छ, जब यो ठुलो सञ्झ्याल भित्री मा राख्नु पर्छ र हरेक तीन हप्ता, वा एक महिना पनि एकपटक पानी पिउन सकिन्छ। सामान्यतया समय जब पौधे हुन्छ, नोभेम्बरदेखि मार्च सम्म हुन्छ, पछि यो फेरि गर्मीमा राखिएको छ र सिंचाईको संख्या बढ्छ। यस तरिकामा राखिएको संयंत्र, गर्मीको लागि हरियो मासु बढाउनु राम्रो छ।
गर्मीमा, सबैभन्दा धेरै समयमा, तपाईले प्रत्येक7दिनमा एकपटक पैसाको रूखलाई पानीको पक्का गर्नु पर्छ भने, यो भूमि सुचारु हुन्छ। यदि तपाईं माटो हालतमा ध्यान नदिनुहुन्छ भने, मूल प्रणाली बाढीको जोखिम धेरै उच्च छ, जो अधिक नमी को लागि धेरै संवेदनशील छ।
एक पौधे जो नियमित रूपमा अत्यधिक मात्रामा चिसो हुन्छ, त्यो हो, यो प्रायः भूनता भन्दा बढी जमिन भन्दा बढी हुन्छ, अन्तमा विल्ट वा पत्ते गुमाउँछ। जब रूट प्रणालीको जाँच गर्दा, यो पाइएको छ कि यसको पनीको चिन्ह छ। यस अवस्थामा, पैसा सँधै सुरक्षित गर्न सम्भव छैन।
अर्को रोचक प्रश्न यो छ कि यो एक प्रत्यारोपण पछि पैसाको रूखलाई आवश्यक छ कि छैन। यो प्रक्रिया वार्षिक रूपमा गरिन्छ र प्रश्न धेरै प्रासंगिक छ। यदि बिस्तारै रोटेड rootlets ट्रांसप्लेन्टेशनको समयमा फेला पर्यो भने, तिनीहरू हटाइएको र सुक्खा जमीनमा रोपिएका छन्। त्यस पछि, पानी निकाल्नु एक हप्ता भन्दा अघि छैन। तर यदि बिरुवा स्वस्थ छ, त्यसपछि यो अझै थोडा चिसो छ।
पैसाको रूखमा के पानी पानीको लागी?
कुनै पनि घरपुर्जाको रूपमा, एक मोटी पानीको लागि पानी उपयुक्त छ। यो एक खुल्ला कन्टेनरमा भण्डारण गर्न सर्वोत्तम छ ताकि त्यहाँ क्लोरीन मेटाउन सकिन्छ, जसले रोपण गर्दछ।
पैसाको रूख पानीको लागि पानीको तापमान लगभग घरको रूपमा वा थोरै न्यानो हुनुपर्छ। तर कुनै पनि मामलामा पानीले सीधा ट्यापबाट लिनै हुँदैन, किनकि संवेदनशील जडहरूले यसलाई सहन सक्दैन।
पानी हुनु पर्छ कि बर्तन पानी को एक धारा संग प्रवाह गर्दैन, त्यो धेरै मध्यम छ। यदि यो धेरै अधिक छ भने, फलाममा पानी छोड्नु भन्दा सोरमा हुनुपर्छ, धेरै पौधहरु को लागी।
वसन्त लहसुन बाहिर खोल्ने?
घरमा स्ट्रबेरी बढ्दै
Cyclamen - प्रजनन
फलामलाई कसरी फेरबदल गर्न सकिन्छ?
काली मिर्च बीउ स्प्रेट्स
प्याज "सेन्टुरियन" - विविधता को वर्णन
एनोनारा - रोपण र हेरविचार
जाडोमा दुलही भण्डार गर्दै
बढ्दो गोभीको बिरुवा
कहिले पतनमा लिली प्रत्यारोपण गर्ने?
भित्री इनडोर फूलहरू
कसरी तहखाने मा ढालना देखि छुटकारा प्राप्त गर्न को लागि?
कचौरामा ओवनमा कद्दी पकाइएको
स्प्रे-पाना बालको लागि
अर्जेण्टीनामा विश्व विरासत साइटहरू
इसाबेला रोसेलीनी फेरि फेरि राईको स्वागत हुनेछ
चिकित्सीय भेदी गुप्त अंक हुन्
हेनरी कैवलले केटी-स्टन्टमैन लुसी कार्कसँग भत्काइदिए
Zara को नयाँ संग्रह
पकाएको गोभी र बीटको लागि पकाउनुहोस्
फोटोग्राफिक मेमोरी कसरी विकास गर्ने?
आलस्य र अनैतिकतामाथि कसरी विजयी हुन सक्छ?
पीडाले के गर्छ?
कुन फ्राइङ प्यान राम्रो छ?
महिला जैकेट - सबैभन्दा फैशनेबल मोडेलहरू र उनीहरूलाई के गर्ने?
शीतकालीन विवाहको जूता - जूता, जुत्ता र ugg जूता
मोल्डबाट पर्खालहरू प्रशोधन गर्नु भन्दा?